Kooxaha Ingiriiska Oo Ka Welwelsan Isku-aadka Champions League | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Kooxaha Ingiriiska Oo Ka Welwelsan Isku-aadka Champions League
(24-8-2017) Lix kooxood oo reer Britain ah ayaa sugaya isku aadka horyaallada Yurub ee Britain oo toddobada fiidnimo ee caawa oo si toos ah ay u baahin doonto shabakadda ciyaaraha ee Cadalool.
Kooxda Chelsea ee difaacanaysa Horyaalka Ingiriiska, Tottenham oo kaalinta labaad gashay iyo Manchester City ayaa toos ugu gudbay koobka Champions League.
Intaas ka dibna waxaa ku soo biiray Manchester United oo ku soo guulaystay koobka Europa League.
Waxaa kale oo iyagana isreebreebka ku soo baxay Liverpool oo kaalinta afraad ku dhamaysatay tartanka Champions League iyo kooxda Celtic oo ku guuleysatay horyaalka Scotland, hase yeeshee isreeb-reeb usoo gashay Champions League maadaama lagu xisaabiyo inay ka mid tahay Britain.
Wareegga koobaad ee Horyaallada Yurub ayaa billaabanaya 12-13ka bisha September.
Xilligii u dambeeyay ee lix kooxood oo Britain ka socda ay ka qayb galeen koobka Horyaallada Yurub wuxuu ahaa xilli ciyaareedkii 2007-08dii.
Dhamaan kooxahan waxay ka cabsi qabaan inay afka ka galaan naadiyo awood badan oo marxaladda koowaadba ay ku hadhaan. Tusaale ahaan, Tottenham xili ciyaareedkii hore waxay la kulantay ceeb, markii ay hal kulan ku badin kari wayday garoonka Wembley.
Liverpool oo aan dhawr sannadood lagu arag tartanka Champions League, waxay nasiibkeeda ka eegaysaa dhinaca wanaagsa, waxaanay rajaynaysaa inay ka badbaado kooxo waaweyn oo ku reeba marxaladda koowaad ama groupyada.